Mbola olana… : vitsy mpanohana ny hetsika momba ny hosodoko | NewsMada
Mbola olana… : vitsy mpanohana ny hetsika momba ny hosodoko
Amin’ny ankapobeny, ny hetsika ara-mozika aloha hatreto no mahasarika kokoa ireo mpanohana (fanjakana, orinasa, fikambanana, olon-tsotra, sns). Araka izany, ho an’ny seha-javakanto hafa, mbola sarotra ny manatontosa hetsika, indrindra amin’ny lafiny ara-bola. Anisan’ny misedra izany olana izany, ohatra, ireo miasa sy nanolo-tena amin’ny fampiroboroboana ny hosodoko sy ny kanto araka endrika amam-bika.
Tanterahina, nandritra ny herinandro izao, ny fanofanana manao hosodoko, izay tafiditra ao anatin’ny hetsika « Loka Joseph Ramanankamonjy. Raha ny nambaran’ny sekretera jeneralin’ny fikambanana, mikarakara izany, iantsorohan’izy ireo avokoa izany fanomanana izany.
Anisan’ny mitaky volabe, ohatra, ny fitaovana ampiasain’ireo mpiofana, izay nahatratra efapolo mahery tamin’ity andiany faharoa ity. « Mavesabesatra ihany io, saingy tsy mbola misy mpanohana aloha hatreto, hany ka iantohan’ny tahirin’ny fikambanana », hoy hatrany ity sekretera jeneraly ity.
Manoloana izany, ny fahatontosan’ny hetsika isan-taona, izay midika ho fahavononan’ny mpikarakara hanatratra tanjona lavitra kokoa isan’andiany, no antenaina hisarika ny mpanohana. Izany hoe, mila fahamatorana sy fifehezana ny maha matihanina ny fikarakarana hetsika lehibe toy izao raha tiana ny hahazo mpiara-miasa.
Ankoatra izany, miankina betsaka amin’ny fanentanana amin’ny alalan’ny karazana fampitam-baovao samihafa ny fahombiazan’ny hetsika, azo tarafina amin’ny fahamaroan’ny mpitsidika na ny mpandray anjara amin’izany. Rehefa tratra io, mora kokoa ny ahazoana mpanohana sy mpiara-miombon’antoka.